I-St Brigid's Church Beach Front
Goolwa Beach, South Australia, i-Australia
Hlala egqumeni lesihlabathi elinokuthula nelibukekayo eliphambi kolwandle emaphethelweni e-Goolwa Beach.
Izungezwe ipaki kazwelonke kanye nesiqiwi, i-St Brigid's isiza umbhangqwana onempilo ematasa ukuba uphumule futhi wehlise ijubane.
I-Rustic elegance esontweni likaphayini laseBaltic elineminyaka engu-110, iSt Brigid's idala eyakho i-ambiance ekhethekile kwezothando nomlando.
Izungezwe isiqiwu kazwelonke kanye nesiqiwi, iSt Brigid's inika amandla abantu abanempilo ematasatasa ukubaleka baphumule futhi behlise ijubane.
Ngaphakathi kuka-St Brigid khuphuka izitebhisi ezineminyaka eyi-100 ukuya ekamelweni le-mezzanine eliphelele nombhede we-Queen size. Lala embhedeni ulalele imisindo ephumuzayo yamagagasi agelezayo. Iminyango yengilazi ephindwe kabili ivulekele kuvulandi onamagquma olwandle namagquma esihlabathi.
Ukubhukha okuphezulu kwezihambeli ezimbili zabantu abadala kuphela
Ngezivakashi ezi-4, izivakashi eziyisithupha seziphelele endaweni nganoma yisiphi isikhathi.
Imisebenzi namaphathi akumele kubanjelwe endaweni
Kunikezwe wonke ilineni namathawula
Ukudla kwasekuseni akuhlinzekwa kodwa kunezindawo eziningi ezimangalisayo zebhulakufesi eduze
I-St Brigid's iyindawo enhle yokuphumuza umoya futhi uphumule ngakho-ke ayikho i-Wi-Fi etholakalayo
Izinkuni zomlilo zihlinzeka ngo-April kuze kube sekupheleni kukaSeptemba
Ubuncane bokuhlala ubusuku obubili
Imigomo nemibandela izohlinzekwa ngereferensi yakho ngaphambi kokuhlala kwakho echaza imithetho yendlu.
4.92 ·207 okushiwo abanye
I-St Brigid's iyindawo ekahle yokuhlola iNhlonhlo yeFleurieu ngendawo yakho yokuhlala eyimfihlo. Umnikazi wendawo uyatholakala ukuze akhulume nawe nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi uhlala noma akusize ngokuhlela ngaphambi kokuvakasha kwakho.
I-St Brigid's iyindawo ekahle yokuhlola iNhlonhlo yeFleurieu ngendawo yakho yokuhlala eyimfihlo. Umnikazi wendawo uyatholakala ukuze akhulume nawe nganoma yisiphi isikhathi ngesikh…
Hlola ezinye izinketho ezise- Goolwa Beach namaphethelo